भुजेल गाउँमा पानी पुग्दा रमाएको मन ! – Saurahaonline.com
भुजेल गाउँमा पानी पुग्दा रमाएको मन !
नवलपुरनै घर भएको भएपनि यहाँका धेरै घरहरु, गाउँहरु मेरो लागि नौलो छन् । त्यसै मध्येको एक गाउँ थियो गैंडाकोटको भुजेल गाउँ । यद्यपी पत्रकारिता पेशाले गर्दा आजको मितिमा भने यो गाउँसँग म धेरै नजिकै भएको छु । पहिलो पटक सहकर्मी इन्द्र पोख्रेलको साथमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङका लागि म गैंडाकोट ३ को भुजेल गाउँ पुगेको थिए । सानो गाउँ, छरिएको बस्ती तर निकै सुन्दर ।
गाउँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै शुस्मा भुजेलको घर आउँदो रहेछ । संस्कार पनि कति राम्रो जाने वित्तिकै पिढिमा भएको गुन्द्री तान्दै बस्न आग्रह गर्नुभयो । सहकर्मी इन्द्र गैंडाकोट ३ कै भएकाले उहाँलाई सबैले चिने तर मेरा लागि सबै नयाँ त्यहाँको लागि पनि म नयाँ । फेरी, पत्रकारिता गर्ने भएकाले होला स्वभावले नै म नयाँ मान्छेसँग परिचत र घुलमिल हुन खोजी हाल्ने । त्यहाँपनि धेरै सँग छिटै परिचित बने । तर अन्य ठाउँमा भन्दा यहाँ अल्लि गाह्रो भयो उहाँहरुको समस्या बुझ्न । मैंले मेरो परिचय दिने बित्तिकै रेडियोबाट भनेर बोल्न नै आउँदैन भन्ने उहाँहरुसँग कुरा गर्नै मुस्किल थियो । लजालु स्वभावका उहाँहरु, सुस्माजी कै घरको कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँको आवाज मेरो रेकर्डमा रेकर्ड गर्न निकै बेर संवाद गर्नपर्यो । नजिक बनाउनलाई दिदिको सम्बन्ध पनि गाँसेर दिदि भन्न थाले, मेरो हातमा रेकर्डर देखेर शुस्मा दिदिले यो के हो ? भनेर सोध्दा मैंले रेकर्डर नभनि मोबाईल भनेर चिनाएको थिए । किनकी मलाई थाहा थियो त्यति बेला मैंले सिधै रेकर्डर हो हजुर बोलेको रेकर्ड हुन्छ भनेको भए उहाँ पक्का बोल्नु हुन्थेन । उहाँसँग सामान्य गफ गर्दै जाँदा थाहा भयो गाउँमा शौचालय रहेनछ । गैंडाकोट नगरपालिका भित्र पनि अझै यस्तो समस्या मलाई अचम्म लाग्यो । अनि मैंले सोंधे दिशापिसाब लागे कहाँ जानुहुन्छ त ? उहाँले सहज तरिकाले भन्नुभयो यत्रो जंगल छ, त्यही जाने । मैंले फेरी सोधे घरमा किन शौचालय नबनाएको ? उहाँले आधा बनेको शौचालय देखाउनुभयो । जहाँ शौचालयको भुई पक्कि थियो तर माथि भने बोराले बारेको त्यो पनि आधा च्यात्तिएको । नगरपालिकाले रिङ र शौचालय बनाउने केही सामान त गाउँमा दिएको रहेछ तर बार्ने इट्टा र बालुवा चै दिएनछ । भुजेल गाउँमा भएको ३५ घर मध्ये जम्मा चार–पाँच जनाको घरमा बाहेक अरुको घरमा शौचालय थिएन । शौचालय भएकाहरु पनि दिशापिसाब गर्न जंगल जाने गर्दा रहेछन् । मलाई लाग्यो यति सामान दिएपछि त अरु आफैले पनि बनाउन सक्थे । आफै बनाउन सकिन्न् भन्ने प्रश्नमा उहाँहरुको गुनासो पैसा नभएको भन्ने थियो । म बोल्न नपाउँदै शुस्माजीले भन्नुभयो – “हुन त शौचालय भए पनि के काम पानी छैन ।”
पबित्रा पराजुली, नवलपुर जिल्लामा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायीक रेडियो बिजय एफ.एम र बिजय खबर साप्ताहीकको संमाचार दाता हुनुहुन्छ । उहाँले ग्रामीण विकास र महिला शसक्तीकरणको विषयमा रहेर कलम चलाउदै आउनु भएको छ ।